ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူ Morris Chang တို့၏ဇာတ်လမ်း။ - WorldRef
စက်တင်ဘာလ 27th, 2021
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Texas Instruments မှအသက် ၅၂ နှစ်ရှိအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ Morris Chang သည်ကုမ္ပဏီ၏ထိပ်တန်းအလုပ်အတွက်အပယ်ခံရသည်။ သူသည်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးကမ္ဘာ့မဟာဗျူဟာအရအရေးပါဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သော TSMC ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ဇာတ်လမ်း-
Morris Chang ကိုတရုတ်နိုင်ငံ၊ Ningbo, Chekiang, Ningbo တွင် ၁၉၃၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်လူလတ်တန်းစားမိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ပြည်တွင်းစစ်အမြင့်မှာသူတို့ဟောင်ကောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် Morris Chang သည် Harvard တက္ကသိုလ်သို့လက်ခံပြီးနောက်အမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင်တစ်နှစ်သာကြာပြီးနောက်သူသည် Massachusetts Institute of Technology (MIT) သို့အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
- သူသည်ဆက်လက်လေ့လာပြီးပါရဂူဘွဲ့ရလိုသော်လည်းအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျရှုံးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ခဲ့ရသည်။
သူသည် Sylvania Semiconductor နှင့် ၀ င်ခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Texas ပြည်နယ် Dallas တွင်တိုးတက်နေသောနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သော Texas Instruments တွင်အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးကိုလက်ခံခဲ့သည်။
TI က Morris Chang အတွက်အဲဒါကိုအားလုံးကနှိပ်ပါ။ Texas Instruments တွင်သူ၏ ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်း Chang သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်များမှတစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ semiconductor လုပ်ငန်း၏အကြီးတန်းအရာရှိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းသူသည် Stanford မှသူ၏ PhD ဘွဲ့ကိုလည်းရခဲ့သည်။
C-suite သို့အမြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေသော Morris Chang ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်ရုန်းကန်နေရသည့်စားသုံးသူလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်ရန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးသူသည်မမျှော်လင့်သောအလှည့်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ Morris Chang သည်အသတ်ခံလိုက်ရသည်မှာသိသာထင်ရှားသည်။
- သူသည် TI မှနုတ်ထွက်ခဲ့သည် 1983.
- ယခုအသက် ၅၂၊ အလုပ်အကိုင်အများစုသည်ဆုတ်ယုတ်နေသည့်အသက်အရွယ်၊ Morris Chang ၏ခရီးသည်အစသာရှိသေးသည်။ ထိုင်ဝမ်အစိုးရကသူ့ကိုထိုင်ဝမ်ကိုလာဖို့နဲ့တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုသူ့ရဲ့နည်းပညာရှုပ်ထွေးမှုကိုခေတ်မီအောင်ကူညီဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်မှာ semiconductor လုပ်ငန်းကိုသူသုတေသနလုပ်တဲ့အခါသူတွေ့တဲ့အရာကအားရစရာမကောင်းပါဘူး၊ R&D မရှိ၊ ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်မရှိ၊ IP မရှိ။ တည်ရှိခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာ semiconductor ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အချို့ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ဤထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် TI ၌သူ၏နေ့စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကောင်းစွာလိုက်ဖက်သည်။ Chip ဒီဇိုင်နာများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများကိုမကြာခဏစတင်လိုကြသည်။ ဒါပေမယ့် Chip ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဒီ Chip ဒီဇိုင်နာများဟာအဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် Morris Chang သည်ထိုင်ဝမ် Semiconductor ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ (TSMC) ကိုစင်ကြယ်သောချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Shopify သည်လွတ်လပ်သောကစားသမားများကိုအွန်လိုင်းရောင်းချနိုင်ရန်ဖွင့်ပေးသောနည်းလမ်းအတိုင်း TSMC သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် chip ကုမ္ပဏီများကိုကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများစတင်ရန်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
“ fabless” (ဆိုလိုသည်မှာဒီဇိုင်းအတွက်သာ) ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများ၏ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးလျင်မြန်စွာပေါက်လာသည်။
- ယနေ့ TSMC သည်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့ ၀ င်ငွေများများနှင့်အတူ Chip ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်ရေးလောက၏အကြီးဆုံးစာချုပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်$ 50 ဘီလီယံအထိနှင့်စျေးကွက် ဦး ထုပ်> $ 500 ဘီလီယံအထိ
-သူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကဒုတိယနေရာမှာမရှိဘူး။ နည်းပညာအားသာချက်များကိုကျော်လွှားရန်အလွန်ခက်ခဲသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် TSMC သည်မရပ်မနားပေါ်လာသည်။
TSMC သည်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအပါဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Morris Chang သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် CEO ရာထူးမှအငြိမ်းစားယူခဲ့သော်လည်း TSMC ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ သူ၏အသားတင်တန်ဖိုးသည်နီးပါးဖြစ်သည် $3ဘီလီယံအထိ.
စက်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေး | အရေးပေါ်ဝယ်ယူမှု | စက်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် | အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒီဇိုင်း | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အားဆက်သွယ်ခြင်း | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အား Deputation | Turnkey စီမံကိန်း Solutions | မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး | နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | ပို့ကုန်သွင်းကုန်အထောက်အပံ့